Gaajadu aad bay u hooseysaa, Kaniisada Dunida ee Switzerland (WKG)
«Qof walba si filaan ayuu kuu eegayaa waxaadna siisaa cunno waqti ku habboon. Gacantaadaad furi doontaa oo waxaad dhergineysaa abuurladaada ... » (Sabuurradii 145, 15-16 Rajada Dadka oo dhan).
Mararka qaar waxaan dareemaa gaajo qaylinaya meel gudaha ah oo qoto dheer. Fikradayda waxaan isku dayaa inaan iska iloobo oo aan xakameeyo muddo. Laakiin si lama filaan ah ayuu mar kale u soo ifbaxaa.
Waxaan ka hadlayaa rabitaanka, rabitaanka gudaheena ee ah inaan si qoto dheer u baaraandego, qaylada fulinta oo ah inaan si aad ah ugu dadaalno waxyaabo kale. Waan ogahay inaan waxbadan ka doonayo xagga Ilaah. Laakiin sabab uun baa qayladani iiga baqi doontaa, sidii inay wax badan iga weydiisato waxaan awoodaa inaan ku siiyo. Waa cabsi haddii aan u soo daayo inay tusayaan dhinacyada i karaya. Waxay muujin doontaa nuglaanshahayga, waxay shaaca ka qaadaysaa baahida aan u qabo balwadda wax ama qof weyn. Oo Daa'uudna wuu gaajaysanaa Ilaah, oo aan lagu sheegi karin hadallo keliya. Wuxuu u qoray gabay Sabuur ah oo weli wuu sheegi kari waayey wuxuu isku dayay inuu yiraahdo.
Waxaan u maleynayaa inaan dhamaanteen la kulanno dareenkan waqti ka waqti. Falimaha Rasuullada 17,27 wuxuu leeyahay: "Waxyaabahaas oo dhan ayuu u sameeyay isaga oo raba in dadku raadsadaan. Waa inaad awoodid inaad dareento oo aad isaga hesho. Xaqiiqdiina, aad ayuu isugu dhow yahay qof kasta oo inaga mid ah! » Eebbe waa kan ku abuuray rabitaanka isaga. Markuu na jiito, waxaan dareemeynaa gaajo. Badanaa waxaan qaadannaa wakhti gaaban oo aamusnaan ama tukasho ah, laakiin runtii waqti uma qaadanno inaan raadino isaga. Waxaan qaadanaa dhowr daqiiqo si aan u maqalno codkiisa ka dibna waan is dhiibno. Waxaan aad ugu mashquulsan nahay inaan sii dheeraanno, oh waxaan arki karnaa kaliya sida ugu dhow ee aan isaga ugu dhowaanno. Runtii ma fileynay inaan maqalno wax? Haddii ay sidaas tahay, miyaannan dhageysan doonin sidii nolosheena ay ku tiirsan tahay?
Gaajadaasi waa mid ay doonayso inay ku qanacdo hal abuuraheena. Habka kaliya ee lagu naasnuujin karo waa inuu waqti la qaato Ilaah. Haddii gaajadu xoog leedahay, waxaan ubaahanahay waqti dheeri ah. Dhamaanteen waxaan ku noolnahay nolol mashquul ah, laakiin maxaa noogu muhiimsan? Miyaan diyaar u nahay inaan si fiican isaga baranno? Diyaar ma u tahay? Ka waran haddii uu codsado wax ka badan saacad subaxa hore? Ka waran haddii uu codsaday laba saacadood iyo xitaa qadada qadada? Ka waran haddii uu i weydiisto in aan aado dibada oo aan la noolaado dad aan weligood injiilka maqlin?
Miyaad diyaar u nahay inaan fikradaheena, waqtigeena iyo nolosheena siinno Masiixa? Waxay shaki la'aan noqon doontaa inay u qalanto. Abaalgudku wuxuu noqon doonaa mid weyn, dad badanina way ogaan karaan sababta oo ah waxaad sameyneysaa.
Aabe, i sii rabitaanka aan kugula jiro qalbigayga oo dhan. Waxaad ballanqaadday inaad nala kulmi doontid markaan kuu soo dhowaano. Waxaan rabaa inaan maanta kuu dhawaado. Aamiin